Google Ads Audit : Tora Google Ads Kuongorora kweMahara
clever ads Log in pamwe Google
Free paIndaneti kushambadza Ezvemutauro
Gadzira yako Google Ads mishandirapamwe mukubwaira kweziso.
Tsvaga akakodzera mazwi Google Ads .
Ongorora uye gadzirisa yako Google Ads makwikwi.
Gadzira mabhenji ads Ratidza makampeni.
Ita kuti Google Ads ishandurirwe otomatiki kune chero mutauro.
Integrations nokuti paIndaneti zvokushambadzira
Isa kodhi yedu yekusimudzira uye tora mahara Google Ads kiredhiti.
Microsoft Teams Kubatanidzwa
Gamuchira yako PPC ads kuita Microsoft Teams .
Wona, enzanisa uye nekuvandudza ako ads macampaign kubva kunharembozha yako
Digital Nokuchinja Pack
Gadzira website yako kubva muvare uye kutanga okushambadza mahara.
Gamuchira yako PPC ads mashandiro Slack .
Wedzera- Google Sheets
Uya nePPC yako yekushambadzira data Google Sheets .
Gamuchira yako PPC ads mashandiro paGoogle Chat.
The vanofanira-vane zvokushandisa kuti pakushambadzira masangano.
Log in pamwe Google
Tora yekupedzisira kudonhedza kubva kwako ads mishandirapamwe Clever Google Ads Audit
Natsiridza yako Google Ads mushandirapamwe kuita kushoma.
Ongorora makwikwi Google Ads emahara izvozvi
Rate your Google Ads campaigns in a second chete.
Mukubwaira kweziso. Clever Audit mamaki ako anoshanda Google Ads mushandirapamwe. Iye zvino zvaunenge uine pekutanga, seta chinangwa.
The ruzivo rwaunoda. Uye kuishandisa.
Clever Audit inoratidza kuvandudzwa kwekusimudzira yako Google Ads mishandirapamwe yekuita kuburikidza yakagadzirira-kushandisa-matipi uye mazano. Aya matipi akarongeka zvinoenderana nezvavanogona kukanganisa kuita kwako.
Shandisa kuvandudzwa imwe pombi.
Clever Audit yakanyatsogadzirirwa kuitira kuti iwe pachako ushandise matipi anonyatsokufadza. Ingoisa izvo zvaunoda. Mukudzvanya kamwe chete.
Kuvandudza mishandirapamwe zvenyu. Ronga vavariro itsva.
Tora peek pamisangano yako Google Ads nguva nenguva uye kuti uone kuti Clever Audit anokubatsira iwe kugadzirisa mashandiro ako. Kusvika wasvika pachinangwa chako.
Gadzirira yako Google Ads mishandirapamwe.
Shandisa Clever Audit muhofisi, uchienda, kana kumahombekombe. Iyi Google Ads yakagadzirirwa kuratidza zvakanaka pane nharembozha uye mapiritsi. Iye zvino unogona kusimudzira yako Google Ads mashandiro nemunwe wako chete.
Kukwira mishandirapamwe dzako uye kukura zvinobatsira yenyu.
Paunenge iwe wasvika yako yakakwira Google Ads mushandirapamwe kuita, inguva yekukwirisa, kukura uye kugadzira mamwe makwikwi ekusvika vateereri vatsva. Zvese zviri pasi pekutonga Clever Audit.
Zvatinogona chinhu? vanozvishandisa Our.
Clever Ads , hapana chinhu chakakosha kwatiri kupfuura vashandisi vedu uye vatengi. Ona zvavari kutaura:
"Ichi chishandiso Google Ads Audit chiri nyore kunzwisisa uye kushandisa. Zvakare, ini ndinogona kuisa shanduko dzakananga kubva padheshibhodhi iyo inondichengetera ini yakawanda maawa ebasa. Yakavandudza ROAS yangu exponentially!"
"Ndine bhizinesi diki rekupfeka muguta rangu, uye yangu yekutengesa Google Ads yakawedzera zvakanyanya kubva pandinozvigadzirisa Clever Ads . Iye zvino ndinoziva izvo zvisiri kushanda mune yangu Google Ads zano uye ini ndinogona kutora nyore matanho."
"Clever Ads akaongorora angu Google Ads mushandirapamwe ipapo uye mahara! Chandinonyanya kufarira ndechekuti ndinogona kuona zviri nyore kushambadza kupi, zvinonditendera kuti ndibate nani mari yangu"
Kutanga kukwidziridza yako Google Ads mishandirapamwe
Kutsvaga FREE odhita ikozvino
We hanya yenyu date kudzivirirwa. Check out yedu zvinhu zvemumwe.
Zvizhinji nezve Clever Ads Audit
Dzidza zvakawanda nezve chishandiso chinokubatsira kumanikidza ako Google Ads emakampeni
Features uye zvakanakira
Iyo yakavandudzwa Google Ads Audit yakagadzirirwa Clever Ads paumire uye kuti uri kure zvakadii nekuve wakanyatsogadziriswa Google Ads mishandirapamwe. Isu tichaita pakarepo kuongorora kwakazara kweGoogle Ads kwemishandirapamwe yako, uye ndokuudza izvo zvaunoda kugadzirisa kuti uwane mhedzisiro.
Save nguva uye mari
Clever Ads Audit inovavarira kukubatsira iwe kuchengetedza mari nekukuzivisa iwe kana iwe uri kushandisa yakawandisa pane mamwe mazwi akakosha, yako yekuvavarira haina kukwidziridzwa, yako yemhando mamakisi ari mashoma, kana yako yekutendeuka yekutevera haisi kushanda pakati pezvimwe zvakawanda zvinhu.
Izvo zvakare zvinokubatsira iwe kunongedza mikana uye nekupa mazano ekuwedzera nyowani-ekushandura mazwi akakosha, kugadzirisa zvawakamisikidza, kugadzira mhando nyowani dzemushandirapamwe, kana kutopedzisa ads kwako nekuwedzera kwakawanda. Regedza kutambisa maawa enguva yako uchiongorora ako makwikwi uye mapoka evashambadziro kuti uwane iwo ari nani mhedzisiro. Gadza chinangwa uye isu tinokuudza iwe kuti ungasvika sei
Vanotungamirira chete watinya rimwe
Yedu Google Ads Audit inokutendera kuti ushandise ese mazano otomatiki nekungobaya chete. Iwe unozogona kuwedzera uye kudzikisa mabhidha, gadzira matsva emishandirapamwe, kushambadzira uye ekuwedzera ekushambadzira, uye kugadzirisa ako kunongedza. Zvese pasina kupinda muGoogle Ads interface, zvakananga kubva Google Ads Audit dashibhodhi.
Maitiro ekuti ushandise zvakanyanya kubva Clever Ads Audit
Yedu Google Ads ongororo inogona kungova yako nyowani yekushambadzira shamwari Tora ichi Google Ads muhomwe yako kuitira kuti mishandirapamwe yako igare ichidzorwa. Sezvaungave iwe uchiziva, Google Ads optimization haisi yeimwe-nguva basa, iwe unofanirwa kuvaka maitiro akaitenderedza uye ugare uchitarisa zveshuwa yako mishandirapamwe 'performance. Google inokurudzira kuita yakadzika Google Ads optimization kanokwana kamwe kana kaviri pamwedzi.
Anofanira-ita pamwedzi Optimization
Needu ane simba Google Ads Audit , haufanire kuyeuka kuita saizvozvo. Tichakuyeuchidza kuti uite ongororo yeGoogle Ads nguva nenguva, saka zvese zvaunofanirwa kuita kupinza papuratifomu uye woita ongororo nyowani yeGoogle Ads kamwechete. Ipapo iwe unowana rondedzero izere yeGoogle Ads matipi uye mazano akarongedzwa zvinoenderana nekukanganisa kwavachave nako pamisangano yako. Tinokurudzira kuti uongorore matipi ane chekuita nekutanga, uyezve kana uchinge waisa iwo aunoda, enda kune epakati uye akaderera maitiro.
Pane yega yega kadhi kadhi, iwe unowana yakatsanangurwa kurudziro nerakawedzerwa ruzivo nezve izvo kuti iwe ugone kukwidziridza ako makwikwi iwe uchidzidza zvimwe pamusoro penyaya. Tinoda kukutungamira iwe paunenge uri Google Ads nyanzvi. Mazhinji matipi akagadzirira-kushandisa zvinoreva kuti iwe unozogona kuishandisa nekungobaya bhatani.
Nguva inotevera paunoita Google Ads Audit nemazano matsva ekuramba uchivandudza mishandirapamwe yako, asi iwe zvakare unozokwanisa kutarisa kufambira mberi kwako uchienzaniswa neakaitwa odhita yapfuura kuti uzive kukanganiswa kunoitwa nemazano akaitwa ndaive pamisangano yako.
Kuva nemishandirapamwe Google Ads yakagadziridzwa kunotora nguva uye moyo murefu, asi kwete zvekare kana uine Google Ads Audit semumwe wako mune mhosva. Nguva imari - ndosaka tichikubatsira iwe kuwedzera kukosha kwenguva yako pamwe nekudzoka pane ese madhora ekushambadza akashandiswa.
Chii chinoita kuti tive vakasiyana
Nei uchishandisa Clever Ads Audit?
Clever Ads isu tinodada Premier Google Partner, saka unogona kuva nechokwadi chekuti maitiro ese 100% akachengeteka uye kuti tinoremekedza zvakavanzika zvako. Isu takatobatsira anopfuura mabhizimusi e100,000 kusimudzira zano ravo Google Ads uye mashandiro nemhedzisiro yakanaka.
Isu takashandura chimwe chinhu chakaoma uye chinotora nguva, kuita chimwe chinhu nekukurumidza, nyore, uye kutishingisa kuti titi kunakidzwa. Iwe unozogona "kutamba" nemazano sekunge anga ari mutambo, kuti ugone kusvika kune yakakwira mamaki - uye ROI - usati watombozviziva. Zvese paunenge uchidzidza zvakawanda kuti uve akachenjera uye ane ruzivo maneja bhizinesi mukuita. Na Clever Ads , iwe unogara uchiziva zvekuita zvinotevera sezvo iwe uchigona kuvimba nesu kuti tibatsirwe nhanho dzako dzinotevera.
Chiono chedu ndechekuti chero bhizinesi rehukuru hwese uye bhajeti rinofanirwa kuwana kushambadza paGoogle. Ndosaka takagadzira iyi yemahara Google Ads Audit yemabhizimusi madiki kuti vakwikwidze zvakaenzana vachipesana nevatambi vakuru vane bhajeti rekushambadzira rakakura. Izvo hazvina basa chikonzero nei iwe uchida kuongorora ako mishandirapamwe: kunyangwe iwe uchifungidzira kuti yako Google Ads mishandirapamwe inogona kunge ichiita zvirinani, kana uchida kutarisa kana wako wekushambadzira agency ari kunyatso kuita basa raro rakanakisa, kana kuti pamwe unongoda kuziva nezve kana basa rako rakaoma riri kubhadhara, Clever Ads chishandiso chako.
Uyezve, chikwata chedu nyanzvi anogara akagadzirira kukubatsira, uye iwe unogona nguva dzose kutaura navo chero mibvunzo, hanya, pfungwa, kana rubatsiro ungada pahi@cleverads.com
Revatema Suite zvekushandisa
Imwe bhenefiti yekushandisa Clever Ads Audit ndeyekuti iwe unogona kuwana zvimwe zvakawanda zvigadzirwa Clever Ads dhibhodhi, kuti ugone kusanganisa iyo Google Ads Audit simba nemamwe maturusi ayo achizokubatsira iwe otomatiki kugadzira mitsva yeGoogle Ads yemishandirapamwe, gadzira mireza mitsva yako bhizinesi, kana tsvaga mutsva wezwi mazano pakati pezvimwe zvinhu. Yedu yese-in-one suite yeGoogle Ads maturasi akagadzirira kuita basa rese iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchikwanisa kuita, kumhanya uye kugadzirisa bhizinesi rako.
We hanya yenyu date kudzivirirwa. Check out yeduzvinhu zvemumwe.
zvinhu zvokutanga pakutanga: tine shure kwako
Tichakukumbira kuti usayine Google Ads yako Google Ads kuti uiongorore uye uiongorore kuitira kuti tikwanise kukupa matipi akasarudzika ekuti uwane zvakanakisa kubva pamushandirapamwe wako. Isu tinotora zvakavanzika zve data zvakanyanya uye tinongotora izvo zvatinoda kuti tikupe iwe neakanakisa chiitiko chinogoneka.
Clever Ads inoshandisa tekinoroji senge makuki kuti uvandudze ruzivo, kugadzirisa zvemukati uye kushambadzira, kupa zvemaficha midhiya, uye kuongorora traffic yedu. Dzvanya pazasi kubvumidza kushandiswa kwetekinoroji iyi pane yedu webhusaiti - uye usanetseka, tinoremekedza zvauri.
Clever Ads anozvikudza Premier Google Partners
Yakagadzirwa neRudo Clever Ads - 2021